Adiga oon aadin jiim, iska rid 1-kiilo ilaa 1.5 kiilo usbuucii
Home Hoyga Nolosha Sida aad adiga oo aan Gym tagin ku dhimi kartid 1-kiilo ilaa...
Soomaali badan ayaa la halgama naftooda si ay iskaga dhimaan miisaanka jirka, balse waxaa guul ka gaaraa dad aan badnayd. Waxaa kale oo xaqiiq ah xittaa hadii aad ku guuleysatid, in uu mar kale soo noqdo taas oo qofka ku khasabta in ay dib usoo bilaabaan shaqadii ay qabteen.
Talooyinka aan kuu wado ayaa ah kuwa hadda ka hor aan aniga tijaabiyay kuna guulaystay, ogoow Dhakhtar ma ahi, waxaan kula wadaagayo waa khibradayda oo keliya. Haddii ay dhab kaatahay in aad ku guuleysatid, waxaad hubisaa in aad si dhab ah u raacdid tallaabooyinkan.
– La tasho takhtarkaaga hadii aad qabtid xanuuno ay tallaabooyinkan dhib u u keeni karaan-
Jooji cuntada noocan ah:
Waxaad gabi ahaanba joojisaa isticmaalka sonkorta, waan ognahay in ay adagtahay in la joojiyo sonkorta, balse waa lama huraan in aad joojisid hadii haad rabtid in aad ka mira dhalisid barnaamajkan miisaan dhinka ah.
Waxaa kale ood joojisaa isticmaalka wax walba oo sonkor kujirto sida; Soodhada ama sharaabka kookada iyo wixii la mid ah, Sharaabyada canbaha iyo dhamaan kuwa laga soo iibsado supermarket-yada.
canjeerada burka cad ka samaysan.
Sababta aan u joojineyno cuntadan ayaa ah in ay dhamaantood leeyihiin sonkor, sonkortana waa sheeyga ugu wayn aad u baahantahay in aad dagaal la gashid sidaad u joojin lahayd.
Saliida aad isticmaashid waa in ay ahaataa nooc caafimaad leh sida Olive oil iyo Saliid macsaro. Saliid cadeey guirgaaga ka fogeey. Soomaalida gaaska dhiba waxyaalaha ku kiciya waxaa ka mid ah saliid cadeeyda.
Fruit-ka sida canbaha, mooska, cananaaska iyo dhamaan inta macaanka leh
Cuntada aad cuni kartid
Canjeerada ama loxooxda subixii waxaad ka samaysan kartaa burka madoow, qamadiga iyo dhowr badar oo aad isku shiidan kartid, waxaad iska ilaalisaa burka galayda ah.
Waxaad cuntaa khudaarta nooc walba ay tahay.
Waxaad cuni kartaa miraha sida canabka iyo noocyadiisa kala duwan. (All berries)
Waxaad cuni kartaa hilibka nooc walba uu yahay, digaaga iyo hilibka guduudan
Waxaad soontaa 16 saac maalin walba
Qabyta ugu muhiimsan ee barnaamajkan miisaan dhimista ayaa ah soomid lix iyo tobban saacadood ah oo lagaa rabo in aad maalin walba samaysid. Dabcan way adagtahay in 16 saac la soomo maali walba, laakiin qaabka aan kuu sheegi doono ayaa kuu sahlaya in aad samaysid.
Waxaa haysataa 24 saacadood, waxaan kaa rabaa 16 saac kamid ah in calooshaada ay marnaato, in calooshaada aysan gelin wax aan ahayn biyo ama shaah bigays ah oo aan lahayn sonkor.
Afkaaga xir saacadahan adiga oon baahi dareemin.
Waxaad joojisaa cuntada ugu dambeysa ee maalintaada shanta (5pm) galabnimo, baahi kuma qaban doonto ilaa aad ka seexatid ilaa 10pm. Waxaad quraacdaada cunaysaa sagaalka subaxnimo (9am). Haddii aad sidaa sameysid, waxaad ku guuleysanaysaa in 16ka saac aad soontid adiga oon dareemin baahi badan, dhowr maalin kadibna jirkaaga ayaa la qabsanaya.
Faa’iidooyin ku salaysan caddeymo caafimaad ee soonka 16-ka saac (Intermittent fasting)
Wuxuu badalaa oo uu hormariyaa shaqada unugyada jirkaaga
Wuxuu si fudud u dhimaa dufanta jirka iyo caloosha (Fat loss)
Wuxuu yareeyaa halite sonkoroowga nooca labaad (Type two diabetes)
Wuxuu yareeyaa gaboowga unugyada jirka, kuwaas oo ka hortaga cudurada ay u nugul yihiin dadka da’da ah
Wuxuu u fiicanyahay caafimaadka wadnaha
Wuxuu u fiican yahay maskaxdaada
Waxaa suurogal ah in uu ka hortago cudurka Kansarka
2 saac oo socod ah maalintii.
Waxaad socotaa hal saac subixii iyo hal saac oo galabkii ama fiidki ah.
Socodkaan ha ahaado mid aan lahayn neeftuur, uma baahnid inaad aad u dhididid, waxa ugu muhiimsan ayaa ah in aad dhaqaaqdid, waddada cagta saartid oo halkaas saac aad soo qaadatid 2 mar maalintii.
Sabti walba waxaa miisaantaa jirkaaga si aad ula socotid marba meesha aad uu miisaankaaga joogo. Marka aad is miisaaneysid, waxaa hubisaa in aadan xirneyn dhar cul culus sida jaakeed, kabo iyo wixii la mid ah. Kadib meel ku qoro si aad u xaqiijiso inta aad tahay.
Haddii aan soo kobo shaqada lagaa rabo si aad hal kilo ilaa hal kiilo iyo bar iskaga dhintid ayaa ah, u fiirso cuntada aad cunaysid, gebi ahaanba jooji sonkorta, baastada iyo canjeerada ama loxooxda aan ka samaysnayn burka madoow, gebi ahaanba jooji rootiga cad, doolshada, xalwada iyo mac macaan oo dhan. Maalin walba soco ugu yaraan laba saac, kala qaybso ama hal mar soco labadda saac, soon oo 16 saac calooshaada ha marnaato.
Fuli arrimahaas, waxaadna heli doontaa abaalgudka aad u shaqaysatay.
FG: Ogoow dadaalkaaga inta uu la egyahay ayeey natiijadaadana la ekaanaysaa.
Previous article5 Arrimood oo la yaab leh oo ku saabsan Kim Jong-un
Next article6 waxyaabood oo cirrada timaha looga hortago, laguna baabi’yo